Rudzi: Manicure, Pedicure
Pane here musiyano mukuru pakati peCND Shellac neOPI Gel Ruvara? Ini ndinobatanidza mhinduro yapfuura. Fomula pro yakanaka kwazvo gel varnishes CND gel varnish yakagara isingachashandi. Zvino…
Ndiudze sei kukwezva vatengi kune novice manicurist? Ndingafarire mienzaniso kubva muhupenyu. Wangu wega muenzaniso. Mushure memakosi ekutanga, uchienzanisa zvandinoita nezvamunoona ...
chii madonhwe kana madonhwe emaniani ndeemachira - chishandiso chekugadzirwa kwembambo. nerubatsiro rwayo, mapoinzi emadhayamita akasiyana anotorwa, yega yega inobata bata yemachira inoita poindi diki pakuenzanisa ...
sei kubvisa yakawedzera zvipikiri? musalon Iupenzi kutora nekuzvicheka wega kana kuenda kusalon, vanozokutemera iwe Tora matomu ezvipikiri kana chigero uteme nzara dzenhema pa ...
Vasikana how much to dry in a lamp gel polish ???? kubva pamaminetsi matatu kusvika gumi, zvinoenderana nekuti ndeipi varnish uye mangani acho ari pazvipikiri maminetsi maviri mumwenje weUV nemasekondi makumi matatu ...
Sei zvigunwe zvangu zvichinhuwirira zvakashata kana zvichichekwa, kunyangwe ndichigeza tsoka dzangu mazuva ese? Uye vakacherekedza kwavanokura kubva. Haisi nzara dzinonhuhwa, asi izvo zvinoungana pasi ...
Kusimbisa ne biogel kana acrylic? Ini ndinoda kusimbiswa ne biogel zvakanyanya - ndeye elastic uye inokombama painorova, uye haina chip. Kana iye tenzi wekutanga aine matambudziko nehupenyu, saka akakosha ...
ndiani anoziva chinokonzera madema matema pazvipikiri? Pazvipikiri zvako? kana PASI pezvipikiri? kana pasi, zvinoratidza kuti hakuna mavhitamini akakwana, kunyanya calcium, zvipikiri hazvina kusimba ...
sei kuwedzera chipikiri ndiro? usacheka kusvika zero, yakafanana ne micronychia. Iyo yemahara pamupendero inofanirwa kugara ichigara, uye zviri nani kwenguva yakareba kupfuura mumufananidzo Wow, uye pasina isu ...
Ndiri kuda kuita manicure kumba. pekutangira, kupi kuwana vatengi? Koshka Umnaja ari pachokwadi asi ini ndanga ndisingade kuita manicure, ndakazviita kakati wandei, ikabhururuka muchiedza =) zvisingatarisirwi! Kubva…
Shellac kana shellac gel polish ndiyo chaiyo polish yegel. Ivo vanosiyana munzira yekushandisa (Ndiri kutaura nezvekutanga kufaira), kusimba, mavara uye kubvisa (shellac inobviswa zviri nyore, asi ...
Maitiro ekuita kuti ganda remaoko ako rinyoro uye rakasununguka kumba Izvo hazvina kunetsa kutarisira ganda rako kumba kana iwe ukatevera mamwe mazano. Mamwe matipi ekutarisira kwemaoko ...
chii chinonzi zita rinokosha rembambo kune avo vanoruma nzara ... handigone kurumura mwana
chii chinonzi zita rinokosha rembambo kune avo vanoruma nzara dzavo ...
Unogona here kutora Mukondombera iwe uchiwana manicure? hutachiona hwehutachiona hutachiona husina kugadzikana ... ipapo, kuti utapukirwe neHIV, iwe unoda imwe nhamba yemasero eutachiona uhu, kwete iyo nyaya yekuti vaive mune iyi nhamba ...
Zvipikiri zvinoputsa zvakanyanya, exfoliate. Zvekuita? zora nzara dzako zuva rega rega nedoro tincture ye calendula (inotengeswa muma pharmacy). Nzara dzinokura dzakareba uye dzakasimba. Maamondi akanaka kune zvipikiri. Yakurudzirwa ...
Marambi eUV ane ngozi here? Mhinduro dzinosetsa! Kunyanya nezvezvipatara, mune makamuri ane disinfected ne ultraviolet mwenje - kazhinji moto! Rambi rembambo reUV rakachengeteka. Radiation spectrum mavari haina kufanana ne ...
batsira kutsvaga kirasi yekudzidzira nhetembo dzekuzvarwa nezve manicure nezve manicure! Makorokoto kumudzidzisi wekirasi! Tinokushuvira rombo rakanaka, kuti mabasa ese agadziriswe! Kuti munhu wese akunzwisise, Usambogumbura, Kuda nemwoyo wose, Zvakanyanya ...
Iwe unogona ndapota kundiudza kana iyo yekutanga ichida kuomeswa mumwenje uye zvinotora nguva yakareba sei kana uchizora biogel kuchipikiri? 1) Iko hakuna kudikanwa kwekuomesa iyo yekutanga, 2) mabiogels kazhinji haadi kushandiswa kwekutanga kweprimer ...
Nzira yekubvisa burrs paminwe yako? ... Pisa mafuta omuorivhi mundiro diki uye dhiza maoko ako mairi. Chengeta kusvikira mafuta atonhorera. Rega oiri idhire, pfeka magurovhosi ekotoni uye ...
Primer kana Bonder? Vasikana vanofanirwa kushandisa gel chipikiri primer uye bonder? Izvi zvidimbu zviviri zvinodiwa here? Kana iye Primer - ari muAfrica - iyo primer iacid iyo ...
Mibvunzo ye55 mu database yakagadzirwa mu 0,620 masekondi.